Sifooyinka Shiinaha Astaamaha aluminiumka khamriga Soosaarka iyo Warshadda | Teng'an
Shaqada walxaha hawo ku jira ee shamiitada hawo ku jirta ayaa ah inay fal-celin kiimikaad ku sameyso qulqulatada, sii deyso gaaska oo sameysato goobooyin yaryar iyo kuwo isku mid ah, sidaa darteed shamiitada hawo-galeenka ahi ay u leedahay qaab-dhismeed dedan.
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah wakiilada dhaliya gaaska, kuwaas oo loo qaybin karo laba qaybood: birta iyo birta. Waxyaabaha soo saara gaaska birta waxaa ka mid ah budo ama dhajiyeyaal sida aluminium (AI), zinc (Zn), magnesium (M2), aluminium-zinc alloys iyo ferrosilicon alloys. Maaddooyinka aan birta ahayn waxaa ka mid ah hydrogen peroxide, miridhku carbide iyo sodium carbonate oo lagu daray hydrochloric acid. Si kastaba ha noqotee, maadaama falcelinta dhalinta gaaska ee aluminium macdanta ah ay fududahay in la xakameeyo, mugga dhalinta gaaska waa mid weyn, waana mid dhaqaale ahaan aad u hooseeya, sidaa darteed xilligan, dhammaan waddamada adduunka waxay u isticmaalaan budada aluminiumka ama koollada aluminiumka inay tahay wakiilka dhaliya gaaska.
Jinka budada ah ee aluminiumku waa shey u eg aluminium budada ah oo ay ku jiraan wakiil difaaca dareeraha ah. Sida budada aluminium, waxaa loo isticmaali karaa inay tahay wakiil gaas dhaliya oo loogu talagalay shubka hawadda. Qalooca astaamaha gaaska dhaliya wuxuu la mid yahay kan budada aluminium. Waa nooc cusub oo ammaan ah oo dhaqaale oo ah wakiilka dhaliya gaaska oo si ballaadhan loo isticmaalay. Jinka budada Aluminium badanaa wuxuu leeyahay astaamaha soo socda
(1) Ma sahlana in siigada la helo
Sidaan wada ognahay, aluminium waa nooc bir bir ah. Cufnaanteedu waa 2.7g / cm3. Aluminium ayaa laga sameeyay budo aad u wanaagsan. Qaybaheeda ayaa gariira ama duufaan yar ku duula, waana wax aad u fudud in lagu duulo oo lagu kala firdho hawada muddo dheer. Marka cufnaanta boodhka ee budada aluminium ay gaarto 40-30mg halkii mitir kuyuubik ah, way qarxi doontaa haddii ay la kulanto dhimbilo. Qaybaha budada aluminium ee ku jira koollada budada ah ee aluminiumku waxay sameysmi doonaan agglomerates ama boomaato hoosta ilaalinta iyo isku xidhka. Xaaladaha caadiga ah awgood, ma jirto ama wax aad u yar oo suurtagal ah oo duulimaad ah. Ammaan ah oo ku habboon markaad wax qabanaysid oo aad miisaameyso
(2) Koronto la'aan
Haddii budada qalalan loo qaado pneumatic ama si dhakhso ah loogu xoqo biraha kale, way fududahay in la soo saaro kharash joogto ah. Haddii korantada aagga korantada korontadu gaarto heer cayiman, waxay abuuri kartaa dhimbiil koronto oo shidaysa budada aluminiumka waxayna sababi kartaa shil qarax qiiqu ka dhasho. Budada Aluminium ma u nugul tahay dhacdadan.
(3) Ha ka baqin hirarka
Budada aluminium ee qallalan waxay leedahay khasaaro ah inay ka cabsato hirarka iyo biyaha inta lagu jiro keydinta iyo gaadiidka. Marka qadar yar oo biyo ah lagu qaso aluminium budada ah, sababo la xiriira isku dhafka biyaha iyo raadadka kaladuwan ee dhibaatooyinka waxyeellada leh ee biyaha, budada aluminium ayaa laga yaabaa inay ka soo ifbaxdo qiiqa qunyar socodka illaa gubashada lama filaanka ah, ama xitaa dab dhalisa. Jinka budada Aluminium badanaa wuxuu ka kooban yahay wakiilka difaaca biyaha, ama waa shey biyo ku saleysan, sidaa darteed kama cabsaneyso qoyaan. Si kastaba ha noqotee, qoyaanka dibedda ayaa saameyn ku yeelan kara nuxurka adag ee aluminium budada ah waana in laga fogaadaa.
(4) Ku habboon miisaannada gacanta
Sababtoo ah budada aluminiumku way fududahay in la boodboodo, waa wax aan ku habboonayn miisaanka hawlgalka. Miisaanku waa mid aad u adag, oo miisaanka farsamada waa inuu lahaadaa qalab si fiican u xiran oo boodhka ka difaacaya ama qalab boodhka ka saaraya. Haddii kale, waxsoosaarka ayaa saameyn ku yeelan doona. Jinka budada Aluminium asal ahaan wax dhibaato ah ma leh. Si kastaba ha noqotee, haddii aluminiumka budada ah ee aluminium lagu qiyaaso farsamo ahaan, waxaa ugu wanaagsan in la diyaariyo ganaax leh feejignaan gaar ah, laguna cabbiro mug ahaan.
(5) Waxay leedahay hawl xasilinta xumbada cayiman
Qaar ka mid ah budada aluminiumku waxay u baahan yihiin inay ku daraan waxyaabo kala duwan oo dusha ka shaqeeya inta lagu jiro habka wax soo saarka. Qaar ka mid ah walxahaani waxay door ka ciyaari karaan xasilinta xumbada. Sidaa darteed, marka xaaladaha howshu saamaxaan, xasiliyaha xumbada waa laga tagi karaa ama waa loo isticmaali karaa wax ka yar.
(6) Badbaadada wax soo saarka
Muuqaalka ugu caansan ee koollada budada aluminiumku waa badbaadada habka wax soo saarka. Marka la shiidayo budada aluminium, qadar cayiman oo budo qalalan ah iyo qalabka dareeraha wax ku shiida dareeraha ayaa badanaa lagu daraa mashiinka hal mar, howsha oo dhan ee wax lagu shiidayo iyadoo la shiidayo jirka aan birta ahayn wuxuu ku jiraa xaalad go'doon ah oo xiran, mana jirto dhibaatada oksidheynta iyo gubashada. Sidaa darteed, nabadgelyada habka wax soo saarku aad ayuu uga sarreeyaa soo saarista budada aluminium.
Hore: Jinka budada aluminium aqueous
Xiga: Baaxadda loo isticmaalo koollada aluminium ee fuuqbaxay
budada aluminiumka la taaban karo
budada aluminium jilicsan
budada aluminium gaas
Baaxadda codsiga aluminium fuuq ...